၂၀၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ တနင်္ဂနွေနေ့ မနက် ၉ နာရီ ဂရမ်းစင်ထရမ်ဘူတာနေ နယူးယောက် အပ်စတိတ်ဖက်သွားတဲ့ ရထားစီး။ တနာရီကျော်လောက်စီး Cold Springs ဘူတာမှာ တော််တော်များများ ဆင်းသွားကြတယ်။ ကိုယ်တို့ဆင်းရတဲ့ဘူတာက Manitou တဲ့။ နောက်ဆုံးတွဲကနေ ဆင်းရတယ် ဘူတာလေးက တကယ့်သေးသေးလေး။ ကိုယ်ရောက်ဖူးသမျှဘူတာထဲမှာ အသေးဆုံးပဲ။ ဆင်းတဲ့သူကလည်း ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်တည်း။ တောင်ပေါ်တက်တဲ့လမ်းမှာ ခွေးတကောင်နဲ့လမ်းလျှောက်လာတဲ့ အန်ကယ်ကြီးက ရင်းနှီးဖော်‌ရွေစွာ နှုတ်ဆက်ပြီး ကားလမ်းမပေါ်အထိ လမ်းပြပေးတယ်။ ဘေးမှာတောင် ကားလမ်းဘေး တောင်စွန်းက လူသွားလမ်းလေးက တယောက်တည်း လျှောက်လို့ရတယ်။ အောက်မှာလူနေအိမ် အပါလာချိန်းတောင်တက်လမ်းမှာ လူတွေအများကြီးတွေ့တယ်။ တံတားအထိလမ်းလျှောက်ပြီး တောင်တက်လမ်းမတွေ့လို့ ပြန်လှည့်။ ကားနဲ့လာတဲ့သူတွေကလည်း အပါလာချိန်းတောင်တက်နေရာကို ဦးတည်နေတော့ အဲ့ဒီလိုသွားလိုက်တယ်။ မေးလိုက်တော့ ဒီကနေပဲတက်ရတာတဲ့ အဖြူရောင်အမှတ်အသားလမ်းအတိုင်းလိုက်။ လမ်းအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ ရှေးကလူတွေသွားတဲ့အတိုင်းတက်တာ ဝိုင်းကတော်တော်မတက်နိုင်ဘူး။ သူကမြေပြန့်သာ တော််တော်လျှောက်နိုင်တာ အဆင်းဆိုဒုက္ခရောက်တယ်။ ကိုယ်ကတော့ အတက်ကိုသာ နည်းနည်းမောတာ အဆင်းကျရင် တရွှတ်တိုက်ကြီး ဆင်းသွားတတ်တယ်။ မညီမညာတဲ့လမ်း ကျောက်တုံးအချွှန်တွေနဲ့လမ်း ရွှံ့တွေနဲ့ချော်နေတဲ့ကမ်းခြေဆိုလည်း ကိုယ်ကလျှောက်တတ်တယ် ဟိုင်းကြီးသူကိုး။ အတက် မိုင်ဝက်ကတော့ တော်တော်မတ်တယ် ဟိုက်နေအောင် တက်ရတယ်။ ၂၀၁၃ မေရီလန်းပြည်နယ် ရှယ်နယ်ဒိုးဝါး ၂၀၂၁ ဒီဇင်ဘာ Mt. Tammy တက်တုန်းကလိုပဲ တော်တော်တက်ယူရတယ်။ တောင်ပေါ််ရောက်တော့ ပြေပြေလေး ဗျူးဗွိုင့်မှာဓာတ်ပုံရောက်တော့ လေကတဝူးဝူး။ လူတောင်လွှင့်ထွက်သွားမလား ထင်ရတယ်။ ကိုယ်တို့ဘေးကတအုပ်က ဖိလစ်ပိုင်တွေထင်တယ် ဓာတ်ပုံအသားကုန်ရိုက်။ ရှုခင်းကလှပေးမဲ့ လေတအားတိုက်လို့ ခဏပဲနေနိုင်တယ်။ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ Bear Mountain ဟတ်ဆန်ဖြစ် တံတားလေးနဲ့ အင်မတန်လှတယ်။ ဆောင်းဦးရာသီဆိုရင် တော်တော်လှမှာ ပြန်လာဦးမယ်။
လမ်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ အန်ကယ်ကြီးက Camp Smith Trail လမ်းအတိုင်း Garrison ဘူတာအထိ ဟိုက်ကင်းကြတယ်။ ဂယ်ရီဆင်ဘူတာနားက တာကိုးဆိုင် သိပ်ကောင်းတယ်တဲ့။ Camp Smith Trail ရှာတာ All Trails Maps မှာ တွေ့ပေမဲ့ အပြင်မှာမတွေ့ အပြာရောင်အမှတ်အသားတော့တွေ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ Camp Smith Trail လို့မတွေ့ ရှေ့ဆက်သွားလိုက် နောက်ပြန်ဆုတ်လိုက် ဘေးကိုသွားကြည့်လိုက်နဲ့။ တောင်တက်သမားတွေကို မေးကြည့်တော့ မသိဘူးတဲ့။ အဲ့ဒီဘလူးမာ့ခ်အမှတ်အသားအတိုင်း လျှောက်ကြည့်မယ်ဆိုပြီး လျှောက်ကြည့်တော့မှ Camp Smith Trail လမ်းပေါ််ရောက်တယ်။ ထရေးလမ်းက ဟက်ဆန်မြစ်ဘေးအတိုင်းလေး သာယာတယ် လူပြတ်တယ်။ ဒီနေ့က အပါလာချိန်းထရေးလမ်းအတိုင်း သွားမှာဆိုတော့ အပါလာချိန်းထရေးဆီ ဆက်သွားတယ်။ Appalachian Trail က မြောက်ဖက် မိန်း၊ နယူးဟမ်ရှိုင်းယား၊ ဗာမွန်၊ မက်ဆာချူးဆက်၊ ကွန်နက်တီကပ်၊ နယူးယော့ခ်၊ နယူးဂျာဆီ၊ ပန်ဆယ်ဗေးနီးယား၊ မေရီလန်း၊ အနောက်ဗာဂျီးနီးယား၊ ဗာဂျီးနီးယား၊ တန်နက်ဆီ၊ မြောက်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်တွေက တောင်ဖက်ဂျော်ဂျာပြည်နယ်အထိ မိုင် ၂၀၀၀ ကျော်ရှည်တယ်။ ‌တောင်တက်သမားတွေအကြား အပါလာချိန်းထရေးလမ်း အစအဆုံးပြီးတဲ့သူတွေဆို လေးစားအထင်ကြီးကြတယ်။ ‌အနောက်ဖက်မှာဆို PCT လို့ အတိုကောက်ခေါ်််် တဲ့ Pacific Crest Trail နာမည်ကြီးတယ်။ ရစ်နေးဝှစ်သာစပွန်း သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ PCT ရုပ်ရှင်တောင်ရှိတယ်။ အပါလာချိန်းထရေးလမ်းက အဖြူရောင်အမှတ်အသားတွေ သေချာမှတ်ထားတယ်။ တချို့နေရာတွေမှာ တောင်စောင်းတွေကို ခက်ခက်ခဲခဲဆင်းရတယ်။ လူပြတ်တော့ ကြောက်တာ‌ပေါ့ အင်တာနက်မိလို့ ‌တော််သေးတယ်။ Mt. Tammy လမ်းမှားတဲ့အကြောင်းပြောပြီး မကြာပါဘူး ဝိုင်းက အဖြူရောင်ဆိုင်းမတွေ့ဘူးနော်လို့ သတိပေးလို့ ဂူဂယ်မတ်မှာ ကြည့်လိုက်တော့မှ လမ်းမှားနေတယ်။ ဒီလောက် All Trails Maps၊ Google Maps ၂ ခုနဲ့ကြည့်နေတာတောင် လမ်းမှားလိုက်သေးတယ်။
ကြောက်နေတဲ့ဝိုင်းကို မကြာဘူးရောက်တော့မယ်လို့ အားပေးရင် တောင်တက်လမ်းမှာ လူတချို့တွေ့မှ စိတ်အေးသွားတယ်။ အပြန်လမ်းဘေးမှာ စာတိုက်ပုံးတွေ စုံပြုံထားတာတွေ့တော့ အလာစကာကို သတိရသွားတယ်။ အလာစကာမှာ အိမ်တွေက လမ်းမကြီးနဲ့အဝေးမှာဆိုတော့ စာတိုက်တွေကို လမ်းမကြီးဘေးမှာထားတယ်။ တောင်ကုန်း‌မြင့်ကအိမ်ကလေးတွေနဲ့ လူနေကျဲတိတ်ဆိတ် အေးချမ်းတယ်။ နယူးယောက်နဲ့လည်းမဝေး အငြိမ်းစားယူဖို့ကောင်းတဲ့‌နေရာလေး။ မျှော်လင့်ထားတာထက် တနာရီလောက်စောနေတော့ ရထားမှီအောင် ပြေးကြသေးတယ်။ အိုင်ဖုန်း ၁၃ ပရိုမတ်ဖုန်းအသစ်ဆိုတော့ ကင်မရာကောင်းလို့ ဓာတ်ပုံတွေကလှတယ်။ ဆောင်းဦးရာသီတုန်းက မဝယ်မိတာကို နောင်တရတယ်။ အရင်ဖုန်းက အိုင်ဖုန်း ၇ ပလပ် ၄ နှစ်ခွဲကိုင်တယ်။
မေ ၂၅၊ ၂၀၂၂။
အလာစကာမှာလိုပဲ စာတိုက်ပုံးတွေ လမ်းမကြီးဘေးမှာ စုပြုံထား
၂.၂ လမ်းက အပါလာချိန်းထရေးလမ်း အဖြူရောင်ကားလမ်းကနေ
Manitou လမ်းအတိုင်းဆင်းပြီး ဘူတာအထိလျှောက်တယ်
Posted by San San Htun at 4:37 PM0comments
Labels: Hiking, NYC, USA
အဖေတို့ ရန်ကုန်လာရင် တူတော်မောင်က တညလာအိပ်တယ်။ တိုက်ခန်းက ဘုရင့်နောင်လမ်းမနဲ့ကပ်လျပ် ညဖက်သစ်လုံးကားတွေဖြတ်တော့ မြေကြီးကိုတုန်နေတာပဲ။ တူတော်မောင်က ဆူညံလို့အိပ်မပျော်ဘူးဆိုပြီး ထထိုင်မယ်လုပ်နေတာ မနက် ၂ နာရီကတည်းကတဲ့။ ခုအရွယ်ကတည်းက အိပ်မပျော်ရင် အသက် ၄၀ လောက်ဆို ဘယ်လိုများနေလဲမသိဘူး။ တူတော်မောင်က နေမကောင်းလို့ ညဖက်အိပ်မပျော်ဘူးတဲ့။ အိပ်မပျော်တော့ ဘာလုပ်နေလဲမေးတော့ မျက်စိမှိတ်ပြီးထိုင်နေတယ်။ ဘာတွေတွေးနေလဲမေးတော့ မနက်ဖြန် ဘာဂိမ်းဆော့မယ် တီဗွီမှာဘာအစီအစဥ်တွေလာမှာ ဘာတွေကြည့်မှာလို့ စဥ်းစားနေတာတဲ့။ ကိုယ်တွေနဲ့ စကားပြောနေရင်း မေမေ လောင်းကစားလုပ်နေတာလားလို့ လှမ်းမေးလို့ သူ့အမေက လောင်းကစားလုပ်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ ကျောင်းသား‌ကို အကြွေလဲပေးနေတာလို့ အမြန်ပြန်ဖြေရတယ်။ အဲ့ဒီလို သူ့အမေလည်းမချန် ဆရာကြီးလုပ်တာ။ သူ့အမေရဲ့ကျောင်းသားတွေကိုလည်း ‌ဟေ့ကောင်တွေ ကြိမ်လုံးယူပေးရမလားနဲ့ ခြိမ်းခြောက်သေးတယ်။ မီးမလာဘူး အင်ဗာတာချွှေသုံးရမယ် ဘယ်အချိန်မီးလာမယ် ‌ဘယ်အချိန်မီးပျက်မယ်။ ဟော မီးလာရင်းနဲ့ မီးပျက်သွားပြန်ပြီ အဲ့ဒါမအလကြောင့်။ မီးမလာတော့ ဘာလုပ်လဲ စာလုပ်တယ်တဲ့။ ယူကျူကနေ ကမ္ဘာလုံးလုပ်တာကြည့်ပြီးလုပ်တယ်။ ကက်ထူစက္ကူတွေကိုရေစိမ် နေလှန်း ကက်ထူစက္ကူမရှိလို့ ကြီးကြီးရေ ပို့ပေးပါတဲ့။ ကုန်စုံဆိုင်တွေမှာ ဝယ်လို့ရပါတယ် သူ့အမေက အလုပ်ရှုပ်လွန်းလို့ မရှိဘူးလို့ ညာထားတာတဲ့။ ကုန်စုံဆိုင်မှာ ဝယ်လို့ရတယ်လို့ပြောတော့ သူ့အမေကိုတကျီကျီ။ သူ့သားက လိုချင်တာကို မရမကဇွဲကြီးကြီးနဲ့ လုပ်တတ်တာ မသိတာလည်းမဟုတ်။ ကလေးကို သေသေချာချာ ရှင်းပြရင် နားလည်ပါတယ်။ မရှင်းပြဘဲ မရဘူးလို့ အလွယ်‌ပြောထည့်လိုက်တာပဲ။ ကက်ထူစက္ကူတွေကို ရေစိမ်နေလှန်း သုံးလေးရက်လောက် လုပ်ရတယ်။ ဂျုံမှုန့်ထည့်နယ် ကက်ထူစက္ကူကပ် သူလိုချင်တဲ့အပြာရောင်ဆေးကို မကြီးကိုလှမ်းမှာ။ ရတော့ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့သုတ်ပြီး ကိုယ်တွေကိုကြွားတယ်။
တော်လိုက်တာ ဓာတ်ပုံပို့ပေးပါနဲ့ မြှောက်တတ်တဲ့ ကြီးတော်တွေနဲ့ အမြှောက်ကြိုက် တူတော်မောင်နဲ့ လိုက်လည်းလိုက်။ သူက ယူကျူ့ကိုကြည့်ပြီး လျှောက်ထွင်နေတာ ဘုန်းသန့်ခေါင်နဲ့ တက်ခနော်လော်ဂျီ ကုမ္ပဏီထောင်မလို့တဲ့ ပေါ့သေးသေးမဟုတ်ဘူးနော်။ သူ့ဂိမ်းထဲမှာ ရွှေတိဂုံဘုရားပုံ ဆောက်ထားတယ်ဆိုပြီး ကိုယ်တို့ကိုဓာတ်ပုံပြတယ်။ ဝါဝါချွှန်ချွှန်ကြီးက ဘာလဲမေးတော့ ဘုရားလေကြီးကြီးရဲ့ ခဏနေတော့ ကြီးကြီး အဲဒါဘုရားဆိုပြီး voice message ပို့တယ်။ ခဏကြာတော့ ဘုရားလေ ကြီးကြီးရဲ့ အဲ့ဒါဘုရားလို့ voice message ထပ်ပို့ပြန်တော့ ကိုယ်တွေမှာ မပြုံးဘဲဝါးလုံးကွဲ ရယ်ကြတော့တာပဲ။ ကိုယ်တွေစကားများ ကိုယ့်အဖေက စကားတခွန်း သုံးခါထပ်ပြောတာ တူတောင်မောင်က ကိုယ်တွေထက်ဆိုးတယ်။ ဘန်ကောက်က ဟိုတယ်မှာ တညလာအိပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းပုံ့ပုံကို တူတော်မောင်က လက်ဆွဲပြီး ဒါကအိပ်ခန်း ၂ ခန်း ရေချိုးခန်း လိုက်ပြတော့တာပဲ ကြွားစိန်။ တို့မိသားစုမှာ ကြွားစိန်နဲ့ စကားများချည်းပဲ ပုံ့ကို ညည်း နားညည်းဖို့သာ ပြင်ထားပေတော့။ တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင် မီးပုံးပျံကို သဘောကျနေတယ်။ သူက နေ့လည်ဖက်လွှတ်တင်တဲ့ မီးပုံးပျံကိုမကြိုက်။ ညဖက်မှာလွှတ်တဲ့ ညမီးကျီး မီးပုံးပျံကို သဘောကျတာတဲ့။ ကိုယ့်ကို ဂူဂယ်မှာရှာခိုင်းတယ်။ ကိုယ်ရှာပေးတဲ့ပုံထဲက တပုံကသူ့အကြိုက်ဆုံးပုံတဲ့။ ၂၀၁၉ ဖေဖေါ်ဝါရီ ပုဂံမှာတုန်းက မီးပုံးပျံတွေနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ကိုယ့်ဓာတ်ပုံကို ပို့ခိုင်းတယ်။ နောက်တခါပြန်လာရင် ပုဂံမှာ မီးပုံပျံအတူတူစီးမယ်တဲ့။ ဘယ်အချိန်ရှိပြီလဲ ပြောကြတော့ သူ့အမေက ၉ နာရီလို့ဖြေတာကို သူက ၈ နာရီ ၅၅ ပါတဲ့ ကိုတိကျ။ အဲ့ဒီနေ့က ဂျပန်က ဖူဂျီတောင်၊ ချယ်ရီပန်း၊ ကျည်ဆန်ရထားအကြောင်း ပြောကြတော့ သူက ဂူဂယ်မှာရှာရင်း suicide forest ဆိုတာတွေ့လို့မေးတယ်။ မကြီးသူငယ်ချင်းက ဖူဂျီတောင်တက်တဲ့ ဓာတ်ပုံပြတော့ ကြီးကြီးသူငယ်ချင်းက နောက်ဆုံးကနေ တက်တာဖြစ်မယ်တဲ့။ ပတ်ဝန်းကျင်လေ့လာစူးစမ်းမှု အားကောင်းတယ်။ ဖူဂျီတောင်အကြောင်း ပြေတာနဲ့ ဂူဂယ်ကနေ ဖူဂျီတောင်ရှာပြီး ပန်းချီဆွဲတော့တာပဲ။
မကြီးက ဆံပင်ညှပ်ခ သက်သာအောင် သူ့ယောကျာ်းကို ဆံပင်ညှပ်ပေးတယ်ပြေတော့ မေမေက မညှပ်တတ်ဘူးတဲ့။ ဆံပင်ညှပ်ခ ဘယ်လောက်ကျလဲ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၀ မြန်မာငွေနဲ့ ‌ဘယ်လောက်ကျလဲမေးတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ကိုယ့်အမေနဲ့ သွားတူတယ် အမေက ဘယ်လောက်ကျလဲ မြန်မာငွေနဲ့ ဘယ်လောက်ကျလဲ အမြဲပေးတယ်။ အမေရေ မြန်မာငွေမတွက်နဲ့ မြန်မာငွေနဲ့တွက်ရင် အကုန်စျေးကြီးတယ်လို့ ပြောထားရတယ်။ တလောက မကြီးက ကျုးရှူးနဲ့ စိန့်ဂျိမ်းကျွှန်းတွေ သွားလည်တယ်လို့ပြောတော့ ကိုယ်တော်ချောက အင်္ဂလိပ်လိုပေါင်းခိုင်းပြီး ဂူဂယ်မှာရှာတော့တာပဲ။ ပြီးတော့ ကျွှန်းက သေးသေးလေးလို့ ပြောသေးတယ်။ အယ်လ်ဖာမျိုးဆက်သစ်ဆိုတော့ တခုခုဆိုတာနဲ့ ဂူဂယ်မှာရှာတော့တာပဲ။ လူကြီးပြောတာလည်း လက်မခံ အတင်းယုံခိုင်းလို့မရ ကြောက်လည်းမကြောက်တတ်။ ခုခေတ်ကလေးတွေ ကိုယ်တို့တွေထပ် ပိုတော်ကြတယ်။ ကြီးကြီးရဲ့ယူကျူ လိုက်ခ်နဲ့ subscribe နည်းလိုက်တာ။ လိုက်ခ်နဲ့ subscribe လုပ်ပေးပါလားဆိုတော့ သူက ကြိုက်မှ လိုက်ခ်နဲ့ subscribe လုပ်တာတဲ့။ ဒီခေတ်ကလေးတွေ မလွယ်ဘူး။
မေ ၁၈၊ ၂၀၂၂။
Posted by San San Htun at 3:32 PM0comments
ဆံပင်လှုဒါန်းခြင်း အနုပညာ ...
ကိုဗစ်နှစ်နှစ်အတွင်း ဆံပင်နှစ်ခါ ညှပ်ဖြစ်တယ်။ ပထမတကြိမ်က ကိုဗစ်အတော်ဆိုးနေချိန်ဆိုတော့ ယူကျူကနေ ကြည့်ပြီးညှပ်တာ ညှပ်လိုက် မညီလိုက် ညှပ်လိုက်နဲ့ အတော်တိုသွားရော။ ဒုတိယအကြိမ်က ကိုဗစ်သိပ်မဆိုးတော့ ဆိုင်မှာသွားညှပ်ဖြစ်တယ် တိရုံလေး။ မထင်မှတ်ဘဲ ကင်ဆာဝေဒနာရှင်တွေအတွက် ဆံပင်လှုလို့ရတယ်ဆိုတာ သိသွားတယ်။ ဆံပင်လှုမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ဆံပင်အရှည်ထားတယ်။ ဆံပင်အရှည်က ၈-၁၂ လက်မ၊ ဆံပင်အဖြူမဖြစ်ရ၊ ဆေးမဆိုးထားရ။ တချို့အဖွဲ့တွေကတော့ ဆံပင်အဖြူလက်ခံတယ်။ ဆံပင်ကို ကျစ်ဆံမြီးကျစ်ပြီးညှပ် ဖောင်ဖြည့် စာတိုက်ကနေပို့ရင် ကျေးဇူးတင်လွှာ ပြန်ပို့ပေးတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကင်ဆာဆေးတွေ သောက်ခဲ့ရပြီး ဆံပင်ကျွှတ်ဖူးလို့ ဆံပင်လှုခွင့်ကြုံတဲ့အခါ လှုချင်မိတယ်။ ကံကောင်းချင်တော့ အမေ့ဆီက ဆံပင်သိပ်မဖြူတာ၊ အဖေ့ဆီက ဆံပင်အုံထူတာ ရနေတယ်။ လှုချင်တာလေး လှုဖြစ်သွားတဲ့အတွက် ‌ဝမ်းသာမိတယ်။
သွေးလှုချင်တာ စင်္ကာပူHSAမှာ သွေးလှုပြီးကတည်းက အိမ်ကသွေးလှုဖို့ ခွင့်မပြုသလို ကိုယ်တိုင်ကလည်း သွေးလှုဖို့ မဖြစ်ဘူးဆိုတာသိတယ်။ သေရင် ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေလှုဖို့ organ donor လုပ်ထားတယ်။ စတိတ်မှာတော့ organ donor လုပ်ဖို့လွယ်တယ်။ ကားမောင်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးတော့ organ donor မှာ yes လို့ဖြေလိုက်တယ်။ ကားမောင်းလိုင်စင်မှာ organ donor အသည်းပုံလေးပါတယ်။ မိသားစုကိုလည်း ပြောထားတယ်။ ကိုယ်သေတဲ့အချိန် လှုလို့ရတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေများ ကျန်ပါ့မလားမသိ။ ABC News မှာ bone marrow transplant အကြောင်းတွေမြင်ရရင် သိပ်လှုချင်တာ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် ကျန်းမာအောင် မနည်းကြိုးစားနေရတာဆိုတော့ လက်လျှော့ထားရတယ်။ ဒီပို့လေးကိုမြင်ပြီး ဆံပင်လှုချင်တဲ့သူတွေ လှုနိုင်ပါစေ။
ပို့စ်အသစ်တင်တာမတွေ့လို့ နေကောင်းရဲ့လားလို့ CBox ကနေ သတင်းမေးတဲ့ Joker ရေ သတိတရ သတင်းမေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပဲနော်။ နေကောင်းပါတယ် မထင်မှတ်ဘဲ ဘန်ကောက်၊ အယုဒ္ဒယ၊ ဖူးခက် သွားဖြစ်၊ အခုတလော အိမ်ကိစ္စတွေ၊ ဗော်လန်တီယာကိစ္စတွေအတွက် အလုပ်များနေလို့ အရင်လို့တပတ်တခါ ပို့စ်မတင်ဖြစ်ဘူး။ ဘန်ကောက်၊ အယုဒ္ဒယ၊ ဖူးခက် သွား တောလားပို့စ်တွေကတော့ လာမယ်ကြာမယ်ပေါ့။ ပို့အသစ်မတင်ဖြစ်တဲ့အခါ ပို့စ်အဟောင်းတွေ ဖတ်ပါနော်။
မေ ၈၊ ၂၀၂၂။
Posted by San San Htun at 2:24 PM0comments
Empire State Trail - 4
၂၀၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၄ စနေနေ့ အင်ပါယာစတိတ်ထရေးလမ်းရဲ့ တစိတ်တပိုင်းဖြစ်တဲ့ WRS Dutchess Rail Trail လမ်းမှာ ၁၁.၄ မိုင် လမ်းလျှောက်ဖြစ်တယ်။ မနက် ၉ နာရီ မက်ဟန်တန် ဂရမ်းစန်ထရယ်ဘူတာကနေ မနက် ၉ နာရီ ရထားစီးပြီး အက်ပ်စတိတ်ဖက် ၂ နာရီလောက်စီး ဂိတ်ဆုံး Poughkeepsie မှာဆင်း။ အရင်တခေါက်တုန်းက ဟက်ဆန်မြစ်ကို ဖြတ်ကျော်ပြီး နယူးဂျာဆီဖက်ကို လမ်းလျှောက်ကြတာ။ ဒီတခေါက်ကတော့ နယူးယောက်ဖက် တံတားပေါ်မှာသာ လူများတာ ထရေးလမ်းမှာ လူနည်းသား။ လမ်းလေးက ပြေပြေဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းလေး စက်ဘီးစီးလို့ကောင်းမယ်။ မမျှော်လင့်ဘဲ ဒီထရေးလမ်းကို တော််တော်သဘောကျသွားတယ်။ နွေရာသီဆိုရင် သိပ်လှမှာပဲ ရှေ့နှစ်နွေရောက်ရင် ပြန်လာမယ်လို့ စိတ်ကူးထားတယ်။ ဝိုင်း BTS မန်ဘာတွေရဲ့ ရယ်စရာ‌အကြောင်းတွေပြောပြ။ ဓာတ်ပုံဆရာတွေကို ဖြေးဖြေးလျှောက်ပါလို့ပြောတော့ World Wide Handsome ကြီး Jin က စလိုးမိုးရှင်းနဲ့ လျှောက်တဲ့ပုံလုပ်ပြ။ ကိုက်ကြိုက်တဲ့ BTS သီချင်းတွေဖွင့်ပြ၊ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအကြောင်း၊ ရုံးက သတင်းတွေ၊ အတင်းတွေချ။ ညောင်းရင်ထိုင်နား သယ်လာ‌တာတွေစား။ ဆောင်းရာသီဆိုတော့ သစ်ရွက်တွေမရှိတော့လို့ သစ်ပင်တွေကိုလည်း ရိုက်လို့မရ။ ဆိုင်းဘုတ်နားမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်တော့ ဖြတ်သွားတဲ့စက်ဘီးစီးအုပ်စုက ချီစ် စမိုင်းလို့ နောက်သွားတယ်။ ညနေ ၃ နာရီ ရထားနဲ့ပြန် ည ၆ နာရီမကျော်ခင် အိမ်ပြန်ရောက်မှ ဆောင်းတွင်းဆိုတော့ ညနေ ၅ နာရီဆိုတာနဲ့ မှောင်နေပြီ ဒါတောင် တနာရီ နောက်ဆုတ်ထားလို့။ မှာထားတဲ့ အစားအသောက်တွေဝင်ယူ ရေချိုးစားသောက်ပြီး တန်းအိပ်တော့တာပဲ။ မအိပ်ခင် ခြေဖဝါးမှာ ဂျပန် detox လုပ်တာလေးကပ်။ ခြေထောက်ကို Epsom Salt နဲ့ရေနွေးလေးနဲ့စိမ် Dr.Tea လိုးရှင်းလိမ်း။ ဟိုက်ကင်းထွက်တဲ့နေ့ဆို အိပ်ပျော်တယ်။
ဧပြီ ၁၂၊ ၂၀၂၂။
Posted by San San Htun at 3:19 PM0comments
အာမီဆိုလို့ စကစ၊ မအလရဲ့ အာမီမဟုတ်ဘူးနော် ဘီတီအက်စ် BTS ရဲ့ အာမီ။ BTS ကိုရီးယားမှာ နာမည်အကြီးဆုံးအဆိုတော်အဖွဲ့။ အရင်ရုံးမှာ ကိုယ့်ဘေးနားမှာထိုင်တဲ့ ဂျယ်ရီက လက်မှတ်တွေရောင်းတယ်။ BTS ရဲ့လက်မှတ်တွေ တနာရီအတွင်း ရောင်းကုန်တယ်လို့ ကိုယ့်ကိုလာပြောတယ်။ ကိုယ်က BTS ဆိုတာဘာမှန်းမသိတော့ သြော်...အင်း...ဟုတ်လားပေါ့။ ၂၀၂၂ ယူအက်စ်သတင်းတွေမှာ BTS အကြောင်းပါလာလို့ ရှာကြည့်လိုက်တော့မှ သိသွားတာ။ ငယ်ငယ်ချောချော ချစ်စရာလေးတွေ သီချင်းတွေလည်း လူတွေအတိုင်း ချစ်စရာ မြူးကြွကချင်စရာ။ ဝိုင်းက BTS ဆိုတာ ငါ့တူမဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေ ကြိုက်ကြတာ ကိုယ်လည်း ဆယ်ကျော်သက်ပဲလေ။ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် RM (Rap Monster) က rap စာသားရွတ်တာ တော်တော်ကောင်းတယ်။ အရပ်အရှည်ဆုံး ၆ ပေကျော်။ အင်္ဂလိပ်စကားကို ကျွှမ်းကျွှမ်းကျင်ကျင်ပြောတတ်လို့ အင်တာ‌ဗျူးတိုင်း‌ ဒိုင်ခံဖြေရ အဖွဲ့ရဲ့ ဘာသာပြန်ဆရာ။ ပစ္စည်းတွေကို အမြဲဖျက်ဆီးတတ်တဲ့ အဖျက်သမား၊ စာဖတ်တာ ဝါသနာပါတယ်။ Suga က အဖွဲ့ထဲကို ဒုတိယရောက်လာတဲ့သူ rapper ၊ ဘတ်စ်စကတ်ဘောသမား၊ ပရိုဂျူဆာ။ ရှက်တတ် အေးအေးနေတတ်သူ အဖွဲ့ဝင်တွေကို ဂရုစိုက်ပေမဲ့ ဂရုစိုက်ကြောင်း မပြတဲ့သူ။ သူ့ကို လာဖက်တာကိုမကြိုက် ကျန်တဲ့သူတွေက ချစ်တယ်လို့ တဖွဖွပြောတတ်ကြပေမဲ့ Suga က ချစ်တယ်လို့ပြောဖို့ အင်မတန်ခက်တဲ့သူ။ အဖွဲ့ဝင်တယောက် ရေဗူးရှာနေတာမြင်ရင် လှမ်းပေးပေမဲ့ မျက်နှာကိုတည့်တည့်မကြည့်ဘဲ ပေးတတ်တဲ့သူ။ အဖွဲ့ကိုစဝင်တုန်းက ကစရာမလိုဘူးဆိုလို့ ဝင်ခဲ့တာ ခုတော့ မဖြစ်မနေကနေရလို့ စိတ်ညစ်တဲ့သူ။ မျက်နှာက ပေါက်စီနဲ့တူပြီး သီးသန့်နေတတ်တဲ့သူ အဘိုးကြီးစတိုင်လေးက ထူးခြားနေပြန်တယ်။ တတိယရောက်လာတဲ့သူက JK (JungKook) အဖွဲ့ထဲမှာ အငယ်ဆုံး ၉၇ မွေး ၂၄ နှစ် ဘူဆန်က။ မျက်လုံးပြူးပြူးလေးနဲ့ အသံကောင်း အဆိုကောင်း အကကောင်း ရုပ်အတော်ချောတဲ့သူ အချစ်ဆုံးတယောက်။ ထရိန်နင်းစဆင်းချိန်မှာ အသက်က ၁၄ နှစ် အကို၆ယောက်က ထိန်းကျောင်းကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ခဲ့ရသူ။ ပန်းချီဆွဲတာတော် ဘောက်ဆင်းကစား ဘာမဆိုအကုန်တော် ဘာမဆိုအနိုင်ရချင်တဲ့ကလေးကြီး။ ခုတော့ ဗလကြီးတွေနဲ့ သူ့အကိုတွေကို အနိုင်ကျင့်နေပြီ။ လက်မှာတက်တူး မျက်ခုံး၊ ပါးစပ်မှာ အပေါက်ဖောက်ပြီး အလှဆင်ထားတယ်။
JK ကို ကမ်းလှမ်းတဲ့ကုမ္ပဏီ အများကြီးမှာ နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတွေလည်းပါတယ်။ JK က RM ရပ်ဆိုနေတာကို သဘောကျလို့ Bit Hit Entertainment ရွေးလိုက်တာတဲ့။ Bit Hit က အဲ့ဒီတုန်းက ကုမ္ပဏီအသေးလေး နာမည်မကြီးသေးဘူး။ နောက်ထပ်ရောက်လာသူက I am your hope. You are my hope. I am J Hope. လို့ နှုတ်ဆက်တတ်တဲ့ ‌ဂျေဟုပ်။ သူက rapper နဲ့ dancer ကတာအတော်ကောင်းတယ်။ ဖက်ရှင်ကျကျ ဝတ်စားတတ်တဲ့သူ။ နာမည်ပြောင် Sunshine ဆိုတဲ့အတိုင်း သူကိုယ်တိုင်လည်း ပျော်ပျော်နေတတ်၊ သူများကိုလည်း ပျော်စေတတ်တဲ့သူ။ သူ့အစ်မက နာမည်ကြီး influencer တယောက်။ ဒယ်ဂူက ဆက်ဆိုဖုန်းတီးတဲ့ V က သူ့သူငယ်ချင်း audition ဝင်ပြိုင်တာကို လိုက်ပေးရင် သူ့သူငယ်ချင်းက အရွေးမခံရဘဲ သူကအရွေးခံရပြီး အဖွဲ့ထဲရောက်လာတဲ့သူ။ မိဘတွေက လယ်သမား အသံကထူးခြားပြီး ‌အော်ပရာသီချင်းဆိုနိုင်တဲ့အသံမျိုး။ နောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့သူက Jimin က modern dancer ။ သူ့ဆရာမက ဝင်ပြိုင်ခိုင်းလို့ ဝင်ပြိုင်ရာကနေ အဖွဲ့ထဲရောက်လာတဲ့သူ။ အသံက မိန်းကလေးအသံလေးလို ချိုသာပြီး အဆွဲအဝိုက်‌လေးတွေနဲ့ တော်တော်ဆိုတတ်တယ်။ ရုပ်ကလေးကလည်း မိန်းကလေးကျနေတာပဲ။ ဂျင်းမင်က အချိန်အမြဲနောက်ကျတတ်သူ။ ဂျင်းမင်နဲ့ ဗွီက ၉၅ ဖွားတွေ ဂျေကေ၊ ဂျင်းမင်နဲ့ ဗွီက အသက်မတိမ်းမယိမ်းတွေဆိုတော့ တတွဲတွဲ။ နောက်ဆုံးမှရောက်လာတဲ့သူကတော့ World Wide Handsome ကြီး Jin။ အဖွဲ့ထဲမှာ အသက်အကြီးဆုံး ၂၉ နှစ် ရုပ်ရှင်မေဂျာတတ်နေတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား။ သူများတွေလို Audition ဝင်ပြိုင်တာမဟုတ်ဘဲ စကောက်ကတွေ့ရှိ ဆက်သွယ်လို့ အဖွဲ့ထဲရောက်လာတဲ့သူ။ အသက်ကသာအကြီးဆုံး သူများကိုစနောက်ဂျီကျတတ်လို့ အငယ်ဆုံးလိုနေတဲ့သူ။ ဟင်းချက်ကောင်းပြီး အကိုကြီးတယောက်လို စောင့်ရှောက်တတ် အမြင့်သံတွေ ဆိုနိုင်တဲ့သူ။ ဟစ်ဟော့အဖွဲ့အဖြစ် စခဲ့ပေမဲ့ ခုတော့အသက်အရွယ်မျိုးစုံကို ဖမ်းစားနိုင်တဲ့ သီချင်း‌တွေ၊ ကကွက်တွေနဲ့ ပရိသတ်အခိုင်အမာ၊ ဆုတွေအများဆုံးရတဲ့အဖွဲ့ ဖြစ်နေပြီ။
လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ဖြစ်လာတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး အိပ်ခန်းတခန်းပါတဲ့ တိုက်ခန်းထဲစုနေ၊ အချိန်အများကြီးလေ့ကျင့်၊ ကုမ္ပဏီက ‌ဒေဝါလီခံ။ ‌ဂီတဖျော်ဖြေပွဲမှာ တခြားအဖွဲ့တွေကျ လေ့ကျင့်ဖို့အခန်းနေရာပေးပြီး ဘီတီအက်စ်ကို နေရာမပေးလို့ အိမ်သာအခန်းမှာ လေ့ကျင့်ခဲ့ရ။ သူတို့ဖျော်ဖြေချိန်ကျမှ အသံမလာတာတို့မျိုး ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေခံရ၊ စွပ်စွဲခံရ၊ မုန်းတဲ့သူတွေက တိုက်ခိုက်ကျနဲ့ အဖွဲ့ဖျက်ဖို့ထိတောင် စဥ်းစားခဲ့ကြတယ်။ ဆယ်နှစ်လောက် အတူတူနေခဲ့ကြတော့ တယောက်အကြောင်း တယောက်သိ။ မင်းစားလိုက်တဲ့ ငှက်ပျောသီးက ငါ့ဟာကွ၊ ဖက်ထုပ်ကို လေ့ကျင့်တာပြီးမှ စားသင့်တယ်၊ အခုစားမယ်နဲ့ ငြင်းခုန်ရန်ဖြစ်ကြ။ သူတို့အချင်းချင်းကို ဂယက်ရိုက်နေတာ။ တယောက်တပေါက်နဲ့ ကျွှတ်ကျွှတ်ညံ ပျော်စရာကြီး။ ကိုယ်လား စိတ်ညစ်ရင် သူတို့ဗွီဒီယိုကြည့်ပြီး ရယ်နေတော့ပဲ။ တကယ့်ဟာသ ငပြောင်လေးတွေ။ မိန်းမကျနေတာပဲ မိတ်ကပ်တွေနဲ့တဲ့ အိုး ဘာဖြစ်လဲ လှလှလေးမြင်ရတာ မကြိုက်ဘူးလား။ သီချင်းအမျိုးအစားအကြောင်းတော့ သိပ်မသိပါဘူး။ သူတို့သီချင်းနားထောင်ရင် မြူးကြွတက်ကြွတယ်။ သူတို့ကို မြင်ရတာ စိတ်ချမ်းသာတယ်။ BTS က သူ့ပရိသတ်ကို အာမီလို့ခေါ်တယ်။ ကိုယ်က ဘီတီအက်စ် အာမီပါ။
ဧပြီ ၂၊ ၂၀၂၂။
From left to right, RM, Jin, JHope, Suga, V, JungKook, Jimin
Photo credit - Allure.com
Posted by San San Htun at 6:00 AM0comments
Mg Mg (3)
My nephew (13)
Myanmar Spring Revolution (15)